Darpan Nepal – राति मान्छे मार्ने लाइसेन्स
राति मान्छे मार्ने लाइसेन्स
काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले हचुवामा निर्णय गर्न थालेपछि उसको परिपक्वताप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। गृहले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्र टिपरका कारण बढ्दो दुर्घटना रोक्न उपत्यकाका तीन जिल्लामा दिनभर टिपर चलाउन रोक लगाएसंगै उसको अपरिपक्वता छर्लङ्ग भएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बुधबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म टिपर चलाउन रोक लगाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त व्यवस्था साउन १ गते मंगलबारदेखि लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
हो, टिपरले धेरै मान्छेलाई टिपिसकेको छ। त्यो पनि दिउँसै। चितवन भरतपुरकी १८ वर्षीया अनुजा घिमिरेलाई गत शनिबार टिपरले नै हिर्काएर सोल्टीमोडमा मार्यो। गत मंगलबार मात्रै जडीबुटीमा टिपरको ठक्करले एक युवाको मृत्यु भएको थियो। उक्त स्थलमै जेठ ३० गते टिपरकै ठक्करले एक युवतीको ज्यान गएको थियो। ती युवती विदेश जान तयार थिइन्।
टिपर महाकाल बन्दै गएको छ। महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा मात्रै टिपरले ४१ जनाको ज्यान टिपेर लगिसकेको छ।
गृहले कतै रातमा मान्छे मार्ने लाइसेन्स दिएजस्तै हुने त हैन ?
सरकारले उपत्यकामा दिउँसोको समयमा टिपर गुडाउन नदिने निर्णय गरेपछि पनि घटना रोकिएको छैन। दिउँसै त मार्न नछोड्ने टिपरले राति झन् के बाँकी राख्ला। सरकारले ढुक्कैसंग मार्न छुट दिनकै राति टिपर चलाउन भनेको त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जुनसुकै नियतले दिएको भए पनि गृहको निर्णय हचुवामा भएको स्पष्ट हुन्छ। दिनमा सजग भएर मोटरसाइकल चलाउनेहरुले रातिमा अब चलाउँदा हजार पटक सोच्नुपर्ने भएको छ। दिनमा त टिपर चलाउँदा ब्याक गरेर मार्न तम्सनेले रातिमा के गर्लान् भनेर सोचिरहनु पर्दैन।
मान्छे मार्दासमेत दोषीलाई कडा कार्वाही हुँदैन। उसले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछ। घटनाको प्रकृति हेरेर कार्वाहीको दायरा फराकिलो नबनाउने हो भने टिपरलाई मान्छे मार्ने साधन भन्दा फरक पर्ने छैन।
रातमा अपराध बढ्ने सम्भावना–
टिपरले राति चलाउन पाउने भएपछि दुर्घटनाको खतरा त हजारौं गुणा बढ्छ नै त्यसरी नै फस्टाउने छ अपराध।काठमाडौं उपत्यकाभित्रै अवैध बालुवा गिट्टी खन्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई वैधता दिने काममा गृह लागेको स्पष्टै हुन्छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का आफ्नै छोरासमेत यसमा संलग्न भएको उच्च स्रोत बताउँछ। टिपरले मान्छे मारेको बहानामा अपराध फस्टाउने चाल त हैन ? बालुवा तस्करी खतरनाक मानिन्छ। भक्तपुर उपत्यका डुब्नु पछाडि यस्तै तस्करीले काम गरेको थियो। केही दिनअघि त्रिशुली नदीबाट तस्करीमा संलग्नहरुले गल्छी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिमाथि नै आक्रमण गरेका थिए। अनैतिक काम गर्न नपाए ज्यान लिन पछि नपर्ने यो जत्थाले रातिमा खुल्लमखुल्ला भएर टिपर चलाउन पाए के गर्ला ?
स्वास्थ्य परीक्षण खोइ ?
यहाँ सामान्य काम गर्न पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। तर चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदैन। टिपर चालकले गराएका दुर्घटनाबाटै स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरुमा अधिक सनकपन छ। यसका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। समाजले भिराइदिएको उपमादेखि उसमा मानसिक समस्या पनि हुन सक्दछ। सामान्यतयाः कम पढेका र सकभर नपढेकाहरुसमेत यो लाइनमा छन्। उनीहरुको मानसपटलमा आउने दवावले सडकको जाम थेग्न नसकेको हो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ।
आर्थिक पाटो पनि छ। के उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नपर्ने ? अनि जतिसुकै मान्छे मारे पनि उनीहरुलाई मार्ने लाइसेन्स दिइरहनु पर्ने ?
अर्को झारा टार्ने कदम
हाल नेपालमा ३० लाख ८० हजार सवारीसाधन छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ११ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्। त्यसैले पनि उपत्यकामा बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न चुनौती बढ्दो छ। यसलाई कम गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नयाँ नियम ल्याएको छ ‘टाइम कार्ड’ को। मालबाहक सवारीसाधनलाई भक्तपुरको जगातीदेखि काठमाडौँको कोटेश्वरसम्म टाइम कार्डको लागू गरिने भएको छ।
भक्तपुरको फराकिलो सडकमा तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना भएपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले साउन १ गतेदेखि टाइम कार्ड लागू गर्न लागेको हो। यो नयाँ नियम अनुसार ट्रक, टिपर, भ्यानलगायतका सवारीसाधनले प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा गुड्नुपर्ने भएको छ। यो टाइमकार्डले दुर्घटना रोकिन्छ भन्ने ठानेर बस्नु मुर्खता नै हो। गति कम हुँदैमा दुर्घटना घट्ने हैन। व्यवस्थित हुनुपर्यो। नियमको पालना हुनुपर्यो। प्रायः यस्ता नियम दुई चार दिन लागु हुन्छन् अनि ट्राफिक थाकिसकेको हुन्छ।
टिपरको आकारले दुर्घटना निम्तिएको गुनासो पनि सुन्न थालिएको छ। चालकले आफूले दायाँपट्टीको भागमा नदेख्ने बताएको पनि ट्राफिक प्रहरीहरु सुनाउँछन्। यदि त्यस्तो हो भने सरकारले तमासा हेरेर बस्ने होइन। तत्काल निश्चित समयसम्म त्यस्ता सवारीमा रोक लगाएर चलाउन मिल्ने गाडीहरु मात्र संचालनमा ल्याउनु पर्यो।
निर्माणको काम रोकिन्छ भन्दैमा टिपरले धमाधम ज्यान लिन पाउँदैन। यदि टिपरको संरचनाले गर्दा समस्या भएको भए तत्काल त्यस्ता गाडी संचालनमा रोकलगाउनु पर्यो। टिपरलाई एक जना पनि मार्न पाउने अधिकार छैन।-हाम्रो कुरा बाट
Previous Post“ब्रान्डेड जिन्दगीको रङ“ Next Postविश्व विजेता फ्रान्सेली टोलीलाई देशकै सर्वोच्च सम्मान !